Ovarian Cyst - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
မမြိုးဥအိမျမှာ ရအေိပျတညျတိုငျး ခှဲရမှာလား?
ဒီဘကျနှဈပိုငိးတှမှောအမြိုးသမီးတျောတျောမြားမြား ကနျြးမာရေး စဈဆေးရငျးဖွဈစေ၊ လက်ခဏာပွလို့ဖွဈစေ မြိုးဥအိမျရအေိပျတညျခွငျး ပွသနာအတှမြေ့ားလာပါတယျ။ မမြိုးဥ အိမျဟာ ပုံမှနျ ရာသီလာတာနဲ့ မြိုးဥ နှဈလုံးလစဉျကွှပွေီး ကိုယျဝနျရအောငျ လုပျဆောငျပေးပါတယျ။အဲ့ဒီမမြိုးဥအိမျမှာ ပုံမှနျမဟုတျဘဲ အရညျကွညျလေးတှေ မြိုးဥ အိမျသို့ အပျေါမှာ ရှိနတောကို ဆိုလိုပါတယျ။
_ ဗိုကျအောကျပိုငျး( ဆီးစပျနရော အထူးသဖွငျ့ပေါငျရငျးထိပျတှမှော ) အောငျ့တောငျ့တောငျ့ ဖွဈတတျပါတယျ။
_ တခြို့ကွလဲ ရအေိတျကွီးလာပွီး ဗိုကျကလေးခပျဖောငျးဖောငျးဖွဈလာတော့မှ သိတတျကွပါတယျ။
_ တခြို့လဲ ရာသီမမှနျဘူး၊ ရငျထဲ ပွညျ့ကယျသလိုမှစပွီး လက်ခဏာအမြိုးမြိုးပွတတျပါတယျ။
ပုံမှနျ အန်တရယျမရှိတဲ့ရအေိတျ(Functional cyst)
က ရာသီစကျဝနျးအလယျမှာ ရှိတတျပါတယျ။ ပုံမှနျမြိုးဥ ကွှရေမယျ့အခြိနျမကွှဘေဲ ကွီးလာတာမြိုးပါ။ စောငျ့ကွညျ့လို့ရပါတယျ။ သိပျမနာတတျ၊ ဒုက်ခမပေးတတျသလို ရာသီစကျဝနျး ၃ခါလောကျပွီးရငျ ပြောကျသှားတတျပါတယျ။
၂) ဆံပငျခညျြ၊ သှားစတာတှပေါရှိနတေတျတဲ့ Dermoid cyst သူက တဈရူးဆဲလျလေးတှပေါနတေတျပမေယျ့ သူလညျး Cancer မပွောငျးတတျပါဘူး။
၃) နောကျ အရညျကွညျလေးတှပေဲရှိနတေတျတဲ့ Cystadenoma သူက တျောတျောကွီးတဲ့အထိ ဖွဈတတျတာမို့ ရအေိတျအညှာချေါ(မြိုးဥအိမျအညှာလိမျတာ)
Ovarian torsion ဖွဈပွီး ရုတျတရကျတအားနာတာမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။
_ ဟျောမုနျးဆေးတှသေောကျသုံးတာမြိုး အထူးသဖွငျ့( မြိုးဥကွှဆေေးသောကျဖူးသူတှေ)
_ ယခငျ ရအေိတျဖွဈဖူးသူတှေ
_ ပွငျးထနျ သားအိမျပိုးဝငျဖူးသူတှဟော ဖွဈနိုငျခပြေိုမြားပါတယျ။
စောငျ့ကွညျ့လို့ရမယျ့ရအေိတျမြိုးဆို ကှနျပွူတာဓာတျမှနျအဖွပေျေါမူတညျပွီး စိတျခလြကျခစြောငျ့ကွညျ့လို့ရပါတယျ။ဆေးသောကျဖို့လိုအပျတယျဆိုရငျ ဆရာဝနျက သန်တတေားဆေးကဲ့သို့ ဟျောမုနျးတားဆေးပေးနိုငျပါတယျ။ ခှဲစိတျဖို့ကတော့ စောငျ့ကွညျ့လို့ရတဲ့ရအေိတျနဲ့ လက်ခဏာမတူတဲ့အခါ၊ ရအေိတျအရမျးကွီးတဲ့အခါ ၊ နာကငျြစတေဲ့အခါမြိုးမှာမှ ရအေိတျထုတျဖို့ ခှဲစိတျခွငျးမြိုးကို လုပျဖို့ အကွံပေးပါလိမျ့မယျ။
ရအေိတျဟာ သှေးဆုံးပွီးခြိနျမှပျေါလာ မယျဆို ကငျဆာဖွဈနိုငျခြေ ရှိပါတယျ။ ကဲ ဒါဆို ရအေိတျတိုငျး ခှဲဖို့လိုမလိုဆိုတာ သိလောကျပွီလို့ထငျပါတယျ။
မမျိုးဥအိမ်မှာ ရေအိပ်တည်တိုင်း ခွဲရမှာလား?
ဒီဘက်နှစ်ပိုငိးတွေမှာအမျိုးသမီးတော်တော်များများ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရင်းဖြစ်စေ၊ လက္ခဏာပြလို့ဖြစ်စေ မျိုးဥအိမ်ရေအိပ်တည်ခြင်း ပြသနာအတွေ့များလာပါတယ်။ မမျိုးဥ အိမ်ဟာ ပုံမှန် ရာသီလာတာနဲ့ မျိုးဥ နှစ်လုံးလစဉ်ကြွေပြီး ကိုယ်ဝန်ရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီမမျိုးဥအိမ်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အရည်ကြည်လေးတွေ မျိုးဥ အိမ်သို့ အပေါ်မှာ ရှိနေတာကို ဆိုလိုပါတယ်။
_ ဗိုက်အောက်ပိုင်း( ဆီးစပ်နေရာ အထူးသဖြင့်ပေါင်ရင်းထိပ်တွေမှာ ) အောင့်တောင့်တောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
_ တချို့ကြလဲ ရေအိတ်ကြီးလာပြီး ဗိုက်ကလေးခပ်ဖောင်းဖောင်းဖြစ်လာတော့မှ သိတတ်ကြပါတယ်။
_ တချို့လဲ ရာသီမမှန်ဘူး၊ ရင်ထဲ ပြည့်ကယ်သလိုမှစပြီး လက္ခဏာအမျိုးမျိုးပြတတ်ပါတယ်။
ပုံမှန် အန္တရယ်မရှိတဲ့ရေအိတ်(Functional cyst)
က ရာသီစက်ဝန်းအလယ်မှာ ရှိတတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်မျိုးဥ ကြွေရမယ့်အချိန်မကြွေဘဲ ကြီးလာတာမျိုးပါ။ စောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ သိပ်မနာတတ်၊ ဒုက္ခမပေးတတ်သလို ရာသီစက်ဝန်း ၃ခါလောက်ပြီးရင် ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။
၂) ဆံပင်ချည်၊ သွားစတာတွေပါရှိနေတတ်တဲ့ Dermoid cyst သူက တစ်ရူးဆဲလ်လေးတွေပါနေတတ်ပေမယ့် သူလည်း Cancer မပြောင်းတတ်ပါဘူး။
၃) နောက် အရည်ကြည်လေးတွေပဲရှိနေတတ်တဲ့ Cystadenoma သူက တော်တော်ကြီးတဲ့အထိ ဖြစ်တတ်တာမို့ ရေအိတ်အညှာခေါ်(မျိုးဥအိမ်အညှာလိမ်တာ)
Ovarian torsion ဖြစ်ပြီး ရုတ်တရက်တအားနာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
_ ဟော်မုန်းဆေးတွေသောက်သုံးတာမျိုး အထူးသဖြင့်( မျိုးဥကြွေဆေးသောက်ဖူးသူတွေ)
_ ယခင် ရေအိတ်ဖြစ်ဖူးသူတွေ
_ ပြင်းထန် သားအိမ်ပိုးဝင်ဖူးသူတွေဟာ ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။
စောင့်ကြည့်လို့ရမယ့်ရေအိတ်မျိုးဆို ကွန်ပြူတာဓာတ်မှန်အဖြေပေါ်မူတည်ပြီး စိတ်ချလက်ချစောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဆေးသောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်က သန္တေတားဆေးကဲ့သို့ ဟော်မုန်းတားဆေးပေးနိုင်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ဖို့ကတော့ စောင့်ကြည့်လို့ရတဲ့ရေအိတ်နဲ့ လက္ခဏာမတူတဲ့အခါ၊ ရေအိတ်အရမ်းကြီးတဲ့အခါ ၊ နာကျင်စေတဲ့အခါမျိုးမှာမှ ရေအိတ်ထုတ်ဖို့ ခွဲစိတ်ခြင်းမျိုးကို လုပ်ဖို့ အကြံပေးပါလိမ့်မယ်။
ရေအိတ်ဟာ သွေးဆုံးပြီးချိန်မှပေါ်လာ မယ်ဆို ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်။ ကဲ ဒါဆို ရေအိတ်တိုင်း ခွဲဖို့လိုမလိုဆိုတာ သိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။